Alshabaab oo Muqdisho ka bilaabay adeegsiga qoryo aan rasaastooda la maqleyn – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Muqdisho – Mareeg.com: Ciidamada dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa shalay galaba Muqdisho ku toogtay nin ay sheegeen inuu ka mid ahaa koox wadatay gaari TOYOTA NOAH, kaasoo rasaas aan la maqelyn ku furay odayaal baar lagu magacaabo Beder oo ku yaalla wasaaradda arrimaha debadda Soomaaliya oo u dhaxeysa Isgoysyada Zobe iyo Banaadir.
Ciidamada hey’adda nabadsugida dowladda federaalka Soomaaliya ayaa meydka nin dhallinyaro ah, gaari TOYOTA NOAH ah, labo qori iyo dhowr bambaanooyinka gacanta laga tuuro ah.
Ciidamada Nabadsugigadda ayaa sheegay in dabley la socotay gaariga TOYOTA NOAH oo rasaas aan shanqarteeda la maqleyn ku furay baarka Beder ay dabagleen, islamarkaana rasaas isku weydaarsadeen meel ku dhow Isgoyska Bakaaraha.
Sida nabadsugiddu warbaahinta u sheegtay, gaariga ayaa markii rasaastu bilaabatay ku dhacay baalle, taasoo keentay in wadihii gaarigu baxsado, halka ay toogteen nin kale oo gaariga saarnaa, kaasoo ay sheegeen inuu ahaa ninkii dadka ku toogtay baarka Beder.
Waxey Nabadsugiddu soo bandhigtay qori aan si weyn loo aqoonin Soomaaliya, kaasoo ay sheegeen inuu yahay qori rasaasta ka dhacda aan la mqali Karin, taasina fududeyneyso in dilal looga fuliyo meel aysan ciidamada amaanku ka fogeyn.
Nabadsugiddu kama hadlin tirada kooxdan hubeysan ku wayeelleeyeen baarka Beder iyo in dhimasho jirto iyo inkale, hase ahaatee waxey ku gaabsadeen in baarka dad odayaal ah lagu toogtay.
Adeegsiga qoryaha aan shanqarta xabadooda la maqli kareyn ayaa loo arkaa xeelad cusub oo Alshabaab ku soo kordhiyeen dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka Soomaaliya iyo dadka kale ee ay necebyihiin.
Todobaadkii hore ayay aheyd markii dabley wadaty gaari ay rasaas ku fureen sarkaal ka tirsan shirkaada Turkish Airlines xafiiskeeda magaalada Muqdisho, xilli uu marayey isgoyska KM4 oo ciidamo farabadan joogaan.